चिनियाँ डेटिङ शिष्टाचार - नियम - भन्सार - सम्बन्ध
चिनियाँ डेटिङ शिष्टाचार — नियम — भन्सार — सम्बन्ध
चिनियाँ डेटिङ शिष्टाचार को एक छ, राम्रो तरिकाले-ज्ञात विशेष डेटिङ संस्कृति को दुनिया मा सम्बन्ध छ । तिनीहरूले साँच्चै फरक थुप्रै तरिकामा तुलना गर्न साधारण डेटिङ शिष्टाचार मा पश्चिमी देशहरुमा, पनि बाँकी देशहरुमा पूर्व एशिया मा. कडा प्रभावित आफ्नो संस्कृति र परम्परा, चिनियाँ आफ्नै नियम को डेटिङ. यो, तथापि, अझै पनि बलियो रहेको यो दिन तल धक्का गर्न कान्छो पुस्ता द्वारा वृद्ध । यदि तपाईं बारेमा केही थाहा छ यो, त्यसपछि तयार प्राप्त गर्न प्रविष्ट एक पूर्ण नयाँ डेटिङ को दुनिया. यहाँ म साझेदारी गर्न लागिरहेको छु तपाईं केही साधारण शिष्टाचार बारेमा डेटिङ संग चिनियाँ । पुरुष र महिला मा, चीन, एक दबाव को धेरै को विवाह रही छ । जब तिनीहरूले पहिले नै मा आफ्नो एस र अझै पनि एकल छ, यो भनिन्छ अप्ठ्यारोमा र पनि विपत्ति छ । किन यो छ»नक्कली»प्रेमी र प्रेमिका मा साधारण हो चीन । किनभने को दबाव पाउन साथी उच्च छ, चिनियाँ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ. परिचित तरिका प्रयोग हो डेटिङ कलेज मित्र, सहयोगी, काम मा वा माध्यम अनलाइन डेटिङ सेवा । यो एक साधारण दृश्य मा चीन जहाँ धेरै जवान मान्छे सँगै बसेर मा एक क्याफे वा रेस्टुरेन्ट धाउन. मा कुञ्जी मा चिनियाँ संस्कृति छ । यसरी, पहिलो छाप खेलेको एक ठूलो भाग मा निरन्तरता को सम्बन्ध छ । प्रशंसा महिला उपस्थिति धेरै साधारण छ चीन । जब पश्चिमी महिला बारी गर्न चाहन्छु उनको अनुहार दूर पछि पुरुष प्रशंसा उनको सुन्दरता, चिनियाँ महिला. तिनीहरूले मन पर्यो जब मानिसहरू प्रशंसा आफ्नो उपस्थिति । जबकि महिला पश्चिमी देशहरुमा खुसी हुनेछन् छनौट गर्न जहाँ खान, चिनियाँ महिला को भर मा अधिक मानिसहरू मा निर्णय बनाउने हो । यो के मा लगभग हरेक अवसरमा यस्तो निर्णय जहाँ खान र आदेश खाना । यो छ छैन भनेर तिनीहरूले हुनुहुन्न गर्न सक्षम हुन बनाउन आफ्नै निर्णय, तर तिनीहरूले कि चिन्तित मानिसहरू यो रुचि वा छैन । जब पुरुष नेतृत्व लिन, उहाँले लिफ्टहरु एक विशाल बोझ बन्द उनको काँध, त्यो चिनियाँ डेटिङ शिष्टाचार परम्परा सोध्छन् चिनियाँ महिला गर्न शर्म हुनेछ र, विशेष गरी तिर मानिस । त्यसैले, शुरू कुराकानी केहि छ चिनियाँ महिला. यो पनि कारण आफ्नो डर को पर्दाफास को पनि धेरै आफु सक्छ कि नेतृत्व गर्न मानिसहरू लाग्छ नराम्ररी तिनीहरूलाई छ । चिनियाँ डेटिङ शिष्टाचार, मानिसहरू लिन नियन्त्रण । पहिले वर्णन रूपमा, महिला हुन सक्दैन पनि खुला तिर मानिसहरू । यो छ किन यस्तो निजी विषय रूपमा आय, जीवित अवस्था, जीवित खर्च, पछिल्लो रोमान्स, र केही अन्य विस्तृत कुराकानी छ एक ठूलो कुनै कुरा गर्न समयमा मिति. सामान्य विषयहरू जस्तै परिवार र साथीहरू छन् अधिक उपयुक्त, पनि प्रशंसा प्रत्येक अन्य स्वरूप । आकस्मिक बैठक अभ्यास मा चीन छ । कान्छो पुस्ता गर्न सुरु गरेको छ, यो के, तर यो अझै पनि अस्वीकार्य मा बडा संस्कृति । भने एक दम्पतीले भेट भएको छ तेस्रो पटक वा अधिक, महिला हुनेछ, यो एक संकेत को रूप, चासो पनि छाप कि तिनीहरूले हुनेछ संभावना प्राप्त गर्न विवाहित छ । चिनियाँ डेटिङ शिष्टाचार, राम्रो तरिकाले कुनै तुच्छ कुरा मा चिनियाँ डेटिङ. जब एक प्रेमी भन्नुभयो,»म तपाईं मिस»वा»म, तपाईं प्रेम», महिला गम्भीर यो लिन छ । कोही होइन मा चिनियाँ भन्नुभयो यी कुराहरू बाहिर बानी वा रूपमा एक सरल मजाक छ । यस विपरीत मा, यो छ रूपमा लिएका एक प्रतिबिम्ब कसैको हृदय । पश्चिमी संस्कृति मा शुरू, प्रेमिका वा प्रेमी आमाबाबुले साधारण हो जुनसुकै गम्भीरता सम्बन्ध छ । जबकि चीन मा, यो एक धेरै फरक कुरा हो । लिएर आफ्नो साथी र तिनीहरूलाई परिचय गर्न आफ्नो आमाबाबुले मिरर को स्तर गम्भीरता आफ्नो सम्बन्ध छ । यस हुन्छन् जब, यो मतलब तपाईं को दुवै गर्न तयार छन् बढाउनु अर्को स्तर गर्न: विवाह । त्यहाँ परम्परा मा चीन जहाँ आमाबाबुले, र सबैभन्दा अवस्थामा, हजुरबा हजुरआमाले अत्यधिक संलग्न केही दम्पतीले गरेको ढुकुरले सम्बन्ध छ । यो सामान्यतया हुन्छ जब आमाबाबुले छन्, जसले एउटा बैठक सेट अप लागि आफ्नो छोराछोरी । यो छैन भने, केही महिला छन् जो चीन मा हो छडी पुरानो परम्परा कहाँ त्यो छ र उनको साथी पूरा हुनेछ मा मात्र भन्ने ठाउँमा द्वारा अनुमोदित गरिएको छ, उनको आमाबाबुले (र हजुरबा हजुरआमाले).
पश्चिमी संस्कृति मा, तपाईं सक्दैन बम संग आफ्नो साथी सयौं कलहरू र पदहरू हरेक अन्य घण्टा. वा अरू, उहाँले प्राप्त हुनेछ रिसले र डम्प तपाईं को लागि बुरा छ । तर मलाई भरोसा छ, कि एक साधारण कुरा हो चीन । यो ठीक छ भने महिला पठाउन पाठ वा कल तीन घन्टा गर्न पूर्व आफ्नो व्यवस्थित बैठक । उच्च दबाव को पा साथी मा चिनियाँ संस्कृति परिणामस्वरूप अन्य कुरा: प्रवृत्ति चिनियाँ महिला लागि विवाह गर्न प्रारम्भिक । कारण यसको संस्कृति-उन्मुख, यो महिला गरेको आमाबाबु र बाजेबज्यै गर्ने यिनै हुन् राखे दबाव मा विवाह कि, महिला आफु तयार छ वा छैन । प्राचीन मानिसहरू जस्तै सेट अप गर्न को छोरी संग वृद्ध मानिसहरू, तिनीहरूले छन् रूपमा बढी विश्वसनीय, पर्याप्त कमाउन, पैसा र सामान्यतया उज्ज्वल भविष्य । चिनियाँ मान्छे कदर वैवाहिक स्थिरता अरू सबै माथि छ । केही मानिसहरू चीन मा विवाह बाहिर को जीवन सुविधा भन्दा प्रेम । किन यो छ. यो पनि आमाबाबुले जस्तै सेट गर्न आफ्ना छोराछोरीलाई मा एक बैठक छ । त्यहाँ एक साधारण संस्कृति चीन मा भनिन्छ विवाहित बजार । र यो शाब्दिक बजार, भीड र रूपमा ठूलो रूप, यो छ । देखि एक सानो मात्रा रूपमा, निजी बैठक आमाबाबुले बीच ठूलो-मात्रा प्रदर्शनी संग सय सहभागीहरू । विशिष्ट, जसले व्यक्तिहरूलाई प्राप्त यो घटना मा संलग्न छन्, आमाबाबुले. तिनीहरूले सामान्यतया अगाडि बसिरहेका एक छाता पूर्णतया लिखित संग आफ्नो छोराछोरीको प्रोफाइल र सकारात्मक मान । तिनीहरूले पनि विज्ञापन आफ्नो छोराछोरीलाई भर घटना हेर्न को लागि संभावित मा-नियमहरू. जब यो खेलमा फेला, तिनीहरूले जारी गर्नेछ निजी सेट अप एक बैठक लागि यो छोराछोरीलाई छ । भने र, यो बाहिर जान्छ राम्रो लागि छ, एक विवाह सम्पन्न गरिनेछ महिना भित्र. जबकि पश्चिमी मोल को छ लगातार कम र आफ्नो महिलाहरु को धेरै छ, एक-रात अडान सम्बन्ध विभिन्न मानिसहरू, चिनियाँ महिला लाग्छ धेरै अत्यधिक स्थिति छ । यस दिन सम्म, कन्या को एक रहिरहन्छ महत्वपूर्ण कुरा, आफ्नो संस्कृति छ । पुरुष लिन एक महिला कन्या, यो अर्थ को अन्तिम लक्ष्य सम्बन्ध छ विवाह । चिनियाँ महिला मात्र दिने को एक तिनीहरूले साँच्चै प्रेम, वा एक तिनीहरूले विवाह गर्न निश्चित भविष्यमा.
यो अब छ साधारण मा चिनियाँ डेटिङ शिष्टाचार आजकल
तर केही मानिसहरू जो मा आयोजित आफ्नो परम्परागत विश्वास लाग्छ कि कुनै राम्रो म्याच तिनीहरूलाई लागि अन्य भन्दा आफ्नै उद्गम. यस्तै समझ मा नै संस्कृति पनि छ एक समर्थन को कारक लागि चिनियाँ मिति गर्न प्रत्येक अन्य । एक नयाँ घटना भनेर प्रकट गर्छ चिनियाँ महिला जस्तै मिति पश्चिमी मानिसहरू । त्यहाँ छौं धेरै तिनीहरूलाई गर्ने मिति पश्चिमी मानिसहरू जस्तै तिनीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ एक लक्जरी जीवन र प्रयोग विवाह रूपमा एक टिकट बाहिर चीन को. तर यो सबै छैन साँचो छ । यहाँ म वर्तमान तपाईं केही कारण के-के चिनियाँ महिला प्रेम देखि पश्चिमी पुरुष: चिनियाँ मानिसहरू ज्यादातर केन्द्रित भएको एक स्थिर काम र एक उज्ज्वल भविष्य छ । तिनीहरूले मन मात्र आफ्नो वित्तीय आवश्यकता बिना कुनै पनि लाग्यो जीवन रमाइलो गर्न । यो के छ, चिनियाँ महिला पाउन पश्चिमी मानिसहरू । तिनीहरूले एक फराकिलो दृष्टिकोण जीवन मा हुनुको आर्थिक स्थिर छैन आफ्नो मुख्य लक्ष्य मा जीवन छ । बरु जीवित, खुसी र सुखी जीवन अधिक महत्त्वपूर्ण छ । यो एक गुणवत्ता बनाउँछ चिनियाँ महिला प्रेम पश्चिमी मानिसहरू । चीन मा, जब एक महिला एक गाढा विगतमा उनको सम्बन्ध यस्तो सम्बन्धविच्छेद यो मानिन्छ छ एक लाज छ. त्यसैले, समाज र आफ्नो भविष्य साथी एक हार्ड समय भएको छ, यो स्वीकार गर्न. लागि एक पश्चिमी मानिस, पछिल्लो सम्बन्ध लज्जित हुन केही छ । तिनीहरूले खुल्लमखुल्ला स्वीकार आफ्नो साथी गरेको पछिल्लो सम्बन्ध र बढ मा सँगै भविष्यमा. चिनियाँ महिला लागि, यो कुरा तिनीहरूले कहिल्यै छौँ पाउन आफ्नो संस्कृति । विवाद, चिनियाँ मानिसहरू को विशिष्ट तिरस्कार कुनै पनि तर्कको देखि आफ्नो साथी । आफ्नो सधैं -नेतृत्व मा लगभग सबै प्रकृति आकृति हुन तिनीहरूलाई निर्णय निर्माता सहित, जब एक लडाई बीच जोडे के. पश्चिमी मानिसहरू, विपरीत मा, स्वेच्छाले सुन्न आफ्नो साथी र समस्या समाधान सँगै । डेटिङ शैली छ कडा प्रभावित संस्कृति जहाँ व्यक्तिहरूलाई मा जीवित वा माथि बढ्न । पश्चिमी र पूर्वी देशहरू, बीच सम्बन्ध पुरुष र महिला छन् देखी विभिन्न बिन्दु । विशेष जहाँ चीन, मा, चिनियाँ डेटिङ शिष्टाचार अझै बलियो रहेको अप यस दिन गर्न. तर, हामी केही तिर्न आदर र हल्कासित नलिनुहोस् छैन, आफ्नो संस्कृति छ ।
← पाउन कसरी अधिक बालिका मा अझै पनि त्यहाँ छन्, अधिक बालिका मा खोज गर्न तपाईं द्वारा. पत्ता कसरी लेख मा
सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक को भिडियो डेटिङ र →